‘शशांक र मेरो काम हेरेर कार्यकर्ताले निर्णय गर्छन्’ - Sainokhabar
होमपेज / गफगाफ / ‘शशांक र मेरो काम हेरेर कार्यकर्ताले निर्णय गर्छन्’
‘शशांक र मेरो काम हेरेर कार्यकर्ताले निर्णय गर्छन्’
बुधबार, साउन १५, २०७६ , साइनो खबर
शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनी कांग्रेसका भावी सभापतिका दाबेदार हुन्। कोइरालासँग कांग्रेसभित्रको पछिल्लो राजनीति र सभापतिमा उनको दाबेदारीबारे सेतोपाटीका शोभा शर्मा र प्रशन्न पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईं जिल्ला-जिल्ला पुगेर कार्यकर्ता भेटिराख्नुहुन्छ। अचेल के भन्छन् कांग्रेसका कार्यकर्ता?
गाउँ, जिल्लाका साथीहरूले हामीलाई भेट्न खोजिराखेका हुन्छन्। हाम्रा कुरा मिडिया,सामाजिक सञ्जालबाट उनीहरूले बुझिराखेका छन् तर त्यतिले पुग्दैन। जिल्ला गएर वस्तुस्थिति बुझ्नुपर्छ। भेट हुँदा जिल्लाका साथीहरूले कम्युनिष्टले साह्रै दु:ख दिएका छन् तपाईंहरू माथि गुट नबनाउनुस् भन्छन्।
केन्द्रमा रहेको कम्युनिष्टको दुई तिहाइको सरकारले हाम्रा साथीहरू निरूत्साहित र हतोत्साही छन्। यस्तो बेला कांग्रेस एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने हो अहिले त्यो भइरहेको छैन।
कार्यकर्ताले मिल्नुस् भन्छन् कि नेतृत्व लिन अघि बढ्नुस् भन्छन्?
कोही ‘दाइ अगाडि बढ्नुस् भन्छन्, कोही मिल्नुस् पनि’ भन्छन्।
तपाईंहरू मिल्नुस् भनेको अहिलेको परिस्थितिलाई बुझ्नुस् भनेको हो। कार्यकर्ताले खोजेजस्तो भूमिका पार्टीले सदन र सडकमा खेल्न सकेन भन्ने हो।
सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल फागुनमा सकिँदैछ। १४ औं महाधिवेशनमा तपाईं सभापति उठ्ने हो?
म जिल्ला घुम्दैछु। साथीभाइहरूसँग भेट्दै छु। राजनीतिमा लागिसके पछि माथि जाने इच्छा सबैको हुन्छ। कार्यकर्ताले मलाई कसरी मूल्यांकन गर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हो। अहिले मलाई कार्यकर्ताले राम्रै रूपमा लिएका छन्। महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेको छैन। कहिले हुने त्यो पनि थाहा छैन।
महामन्त्री शशांक कोइराला पनि सभापति उठ्ने चर्चा छ। कोइराला परिवारबाटै दुई जना सभापति उठ्ने?
एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कोइराला परिवार भनेर हामीले राजनीति गरेको होइन। लिगेसीका केही अंश हुन्छ। तर लिगेसी नै सबै कुरा होइन। भारतमा हेर्नुस् लिगेसीकै कारण कांग्रेस आई बिग्रेको हो। त्यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। लिगेसी सबै कुरा होइन भन्नेमा म स्पष्ट छु। कार्यकर्ताले कसलाई रूचाउँछन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
पार्टीमा को खट्छ? मेहनत कसले गर्छ? को कम्युनिष्टसँग भिड्न सक्छ? यो सबै कुरा कार्यकर्ताले हेर्छन्, मूल्यांकन गर्छन्। हामीले प्रष्ट सन्देश कार्यकर्तालाई दिनुपर्छ। म केन्द्रीय सदस्यमात्रै हो। शशांकजी महामन्त्री हो। काम हेरर निर्णय कार्यकर्ताले लिनुहुन्छ।
शशांकले भन्दा मैले बढी काम गरेको छु भन्ने तपाईंको दाबी हो?
मेरो दाबी स्वभाविक हो। तर सबैले यस्तो दाबी गरिराखेकै छन् त्यो ठूलो कुरा भएन।
खटेरमात्रै के गर्नु? तपाईंको आफ्नो टिम छैन।
के हो टिम भनेको? टिम कसले बनाउँछ? गुट कसले बनाउँछ? जो कमजोर हुन्छ उसले बनाउने हो। सभापतिजी आफैं गुट बनाउनुहुन्छ। कांग्रेस सभापतिले ग्रुप बनाइराख्नुपर्ने जरूरी छ र!
म कुनै ग्रुपमा छैन। तर म एक्लो हिँड्ने पनि होइन। तपाईंहरूले याद गर्नुभएको होला जिल्ला जाँदा अरू साथीहरूलाई लिएर जान्छु।
नेपालगञ्ज जाँदा गगन थापा, बागलुङ जाँदा चन्द्र भण्डारीलाई लिएर गएँ। युवा पुस्ताका नेतालाई अब पार्टीमा अघि बढाउनु पर्छ। उनीहरूको विचारलाई पनि समेटेर जानुपर्छ।
युवालाई अघि बढाउने भन्नुभयो तपाईं आफैं ७० वर्ष हाराहारी पुग्नुभयो नि?
मलाई किन युवा भनिराख्या म त्यही कुरा बुझ्दिनँ। म युवा होइन। ७० वर्ष कटेको त छैन। अधिवेशन हुँदासम्म ७० पुगौंला।
प्रष्ट भन्छु- म युवा होइन तर युवाको जति जाँगर छ, मेरो पेटमा आगो छ।
अहिले १७ वर्ष, २५ वर्ष पुगेका युवाले देशसँग के खोजिराखेका छन्? उनीहरूको अपेक्षाबारे हाम्रो नेतृत्व जानकार छ? यी सबै कुरालाई वास्ता नगरी सभापतिजी गुटमै रमाइराख्नुभएको छ।
म तलसम्म जान चाहेको छु। पार्टीमा पनि गगन थापा, गुरू घिमिरे, प्रदीप पौडेल, चन्द्र भण्डारीलगायतलाई अगाडि बढाएर लैजाने सोचमा छु।
गगन र प्रदीप त कृष्णप्रसाद सिटौलासँग छन्। कसरी खोस्नुहुन्छ?
खोस्ने कुरा होइन। आखिर सबैजना कांग्रेसी हौं। नेतृत्वसँग मेरो मत बाझिन्छ किनभने उहाँहरू आफ्नो गुटलाई मात्रै अघि बढाउन चाहनुहुन्छ।
जो खट्न सक्छ, मेहनती छ, विचार दिन सक्छ उसलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। मेरो इच्छा कांग्रेस बलियो बनाउनेबाहेक अरू केही छैन। मैले पाउनेजति पाइसकें, सांसद भएँ, केन्द्रीय सदस्य भएँ, डाक्टर भएँ। उपकुलपति पनि भएँ।
अब कांग्रेसमा युवा नेतृत्व ल्याउन सकिएन भने हामी चुक्छौं किनभने नयाँ पार्टीहरू खुलिसकेका छन्। पूराना नेताले नयाँलाई छाडेनौं भने कांग्रेसमा नयाँ मानिस कसरी आउँछन्? त्यो हामीले सोच्न पर्‍यो कि परेन? म सभापति हुने पार्टी नेतृत्व बुढाहरूबाट युवामा सार्ने संक्रमणकालीन समयका लागि मात्र हो।
गुटको राजनीति मात्रै गरेर धर पाउँदैनौं। गुटकै राजनीति गर्ने भए त म एउटा गुटमा लागिहाल्थें नि! कांग्रेसमा सबै गुटका साथी आवश्यक छ। बर्खापछि सबै गुटका साथी लिएर फेरि जिल्ला जान्छु।
दाजुभाइ नै उठ्ने अवस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ?
राजनीतिमा दाजुभाइ पनि उठ्दा रहेछन् त। बेलायतमा उठेनन्? (सन् २०१० मा लेवर पार्टीको नेता बन्न एउटै बाबुआमा छोराहरू डेभिड र एड मिलिब्यान्ड भिडेका थिए।) दाइ डेभिड लोकप्रिय थिए। जिते भाइले। दाइले राजनीति छाडेर हिँडे। के भो त?
दुबै जना उठ्ने परिस्थितिमा जित्छु भन्ने लाग्छ?
समय धेरै छ। महाधिवेशन आउन अझै एक/डेढ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। यस बीचमा धेरै कुरा स्पष्ट हुँदै जान्छन्। चिन्ता गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन।
सभापति जित्न त कार्यकर्ताले पत्याउनु पनि पर्ला नि!
एउटा कुरा के बुझ्नुपर्‍यो भने मलाई पत्याएनन् भने के म उठ्छु होला त! यहाँ आएर तपाईं उठ्न हुँदैन भनेर भन्न नसक्ने बाहिर बाहिर भन्नेखालका मानिस विश्वासिला हुँदैनन्।
कांग्रेसमा कस्तो प्रवृत्ति छ भने यहाँ आएर भन्छन्- दाइ तपाईं हो। तिनै मान्छे शशांककोमा जान्छन् र भन्छन्- दाइ तपाईं हो नि अबको सभापति। रामचन्द्रजी, शेरबहादुरजीकहाँ गएर पनि तपाईं नै हो भन्छन्। उनीहरूको केही सोच हुँदैन। त्यस्तासँग सजग हुनुपर्छ।
जित्नलाई नै उठ्ने हो, हार्नलाई त कोही चुनाव उठ्दैन।
यसबारे शशांकसँग कुरा भएको छ कि छैन?
कुराकानी त भइराख्छ। कोइराला परिवारलाई धेरै बोल्न किन दबाब गर्नुहुन्छ? महाधिवेशन आउन डेढ वर्ष लाग्छजस्तो छ। यो बीचमा फेरि म जिल्ला घुम्छु। त्यसपछि ‘माइन्ड मेकअप’ गर्छु।
अहिले पनि ‘माइन्ड मेकअप’ गरिराखेको छु तर त्यसबेला के हुन्छ? कार्यकर्ताले मलाई के भन्छन्? अनि म निर्णय लिन्छु। भोट दिने मान्छेले के भन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।
कांग्रेसमा त धेरै गुट-उपगुट छन्। चुनाव उठ्ने नै भएपछि ती गुट त फुटाउनु पर्ला नि!
आफ्ना साथीहरूलाई मैले अनुकूल बनाउनै पर्छ। म एक्लै उठ्ने होइन। जिल्लाका साथी केन्द्रमा बस्ने नेतासँग दु:खी छन्। कम्युनिष्टले पीडा दिएको छ। अब पूरानै ढर्राले कांग्रेस चल्दैन। नयाँ तरिकाले जानुपर्‍यो। तर यसपटकको महाधिवेशनमा गुट-उपगुछ हट्छ, त्यो हेर्नुहोला।
भनेको नयाँ गुट बनाउनु हुन्छ?
नयाँ गुट भन्दिनँ। गुट बनाउनै हुँदैन। गुटले त पार्टी बिग्रेको हो। विचारको पो गुट हुन्छ। अहिलेका जस्ता पनि गुट हुन्छन्? यी गुटले पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याइसके?
कांग्रेसमा वैचारिक छलफल किन हुँदैन। भेनेजुयला प्रकरणमा प्रचण्डले विज्ञप्ति निकाले। केही दिनअघि त्यहाँका राष्ट्रपतिका छोरा यहाँ आए। यो विषयबारे कांग्रेसमा किन छलफल हुँदैन? सुनकाण्ड, वाइड बडी, गुठी विधेयक, चिकित्सा शिक्षा, एनसेल कर छलीलगायत धेरै मुद्दा सडकमा लैजानु पर्नेछ। कांग्रेस किन मौन भनेर कार्यकर्ताले सोध्छन्। यो गम्भीर कुरा हो। यसबाट माथि उठ्नुपर्‍यो। नेतृत्व लिनुपर्‍यो।
हामी सरकारको खेलमा भने लाग्नु हुँदैन, पाँच वर्ष यही सरकार चलोस्।
सबैलाई मिलाएर लैजान सक्छु भन्ने आँट छ?
किन सकिँदैन? गुट नहेर्ने, राम्रा मान्छेलाई राम्रै ठाउँ दिने हो भने मिलाएर लैजान सकिन्छ। गुट व्यवस्थापनमा विवाद देखिएको हो। शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजीले नेविसंघ, तरूण दल, महिला संघमा गुट व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएको छैन त्यहीँभित्र झगडा छ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा अन्तरिम संरचना बनाएर जाने कि सिधै महाधिवेशन गर्ने छलफल भइरहेको छ। यसबारे तपाईं मौन हुनुहुन्छ, किन?
मलाई सञ्चो नभएर बैठकमा जान पाएको छैन। यस विषयमा मैले बोलेको पनि छैन। यो मितिमा महाधिवेशन गर्ने भनेर पदाधिकारीले मिति ल्याउनुपर्‍यो। केन्द्रीय समितिले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने तीनै तहमा खाली भएका ठाउँमा उपनिर्वाचन मंसिर पहिलो साताभित्र भइसक्नु पर्ने छ। त्यो बेला अन्तरिम संरचना बनाउछु भन्नुभयो भने कांग्रेस सबै ठाउँमा हार्छ।
संरचना बनाउने हो भने असोजभित्र सक्नुपर्‍यो नभए उपनिर्वाचनपछि गठन गर्नुपर्‍यो। २०७९ वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन आउँछ। त्यसपछि आमनिर्वाचन छ। ती कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ।
महाधिवेशन र अन्तरिम संरचना गठनको मिति पनि घोषणा गरेर जानुपर्छ। यसो गर्दा पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हुन्छन्। सभापतिको कार्यकाल सात महिना अझै बाँकी छ। १२ महिना थप गर्ने भनेका छन् १९ महिना त्यसै जान्छ।
तपाईंको विचारमा अन्तरिम संरचना बनाइराख्ने कि सिधै महाधिवेशन गर्ने?
मेरो लागि महाधिवेशन सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। मलाई त डर छ, यस्तै तरिकाले हामी गयौं भने पार्टीको महाधिवेशन समयमै नहुन पनि सक्छ।
महाधिवेशन गरौं। मिति घोषणा गरिहालौं। संरचना जुन ठाउँमा सहमति हुन्छ त्यहाँ गठन गरिहालौं। वडादेखि प्रदेशसम्म संरचना बनाउनुपर्छ।
देउवा, पौडेल, सिटौलाले प्रदेश संरचना भागबन्डामा गर्नुभयो भने म स्वीकार्ने पक्षमा छैन। त्यसैले पहिले महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ अनि हामीले काम गर्न पाइन्छ। तयारी थाल्नु पर्‍यो।
विजयकुमार गच्छादरको पार्टी कांग्रेसमा मिसिएपछिका केही कुरा पनि विवादमा छन्, त्यो विवाद गरिराख्नु पर्ने छैन। जिल्लामा दश प्रतिशत नबढाइकन प्रतिनिधि दिने, क्षेत्र तथा प्रदेशमा पनि त्यसैगरी दिए भइगो।
मिलाउन खोज्यो भने पो हुन्छ रडाको मच्चाइराखेर मात्र हुन्छ।
सभापतिले रडाको मच्चाए भन्न खोज्नुभएको?
होइन, उहाँ संवेदनशील हुनुपर्‍यो भन्न खोजेको। देशको राजनीति कता जाँदैछ? वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी जन्मिसके। कांग्रेसमात्रै वैकल्पिक पार्टी हो भन्ने अवस्था छैन। कांग्रेसले जुन पराजय भोग्यो यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर छिटो महाधिवेशन गर्ने भन्दा अर्को विकल्प छैन।
पार्टी बिग्रियो, सडकमा र संसदमा भूमिका खेल्न सकेन भन्ने पनि यहाँलाई थाहा छ। किन सभापतिलाई सुझाव दिनुहुन्न?
धेरै पटक भेटेर भनिसकें। उहाँ हाम्रा कुरा धेरै सुन्नुहुन्न। गुटमा भएको नेताले कुरा सुन्दो रहेनछ। आफ्नो कोटरीको भन्दा अरूको कुरा सुन्दैनन्। सबै नेताको हेर्नुस् न। नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताका गुट दिमागमा राख्नुस् गुटले भनेकोभन्दा बाहेक केही गरेका छन्? कुनै पनि पार्टीका नेताले गर्न सकेका छैनन्। कांग्रेस, नेकपामात्र होइन राजपा, विवेकशीलले पनि नेताले के भन्छन् भनेर मुख हेर्छन्।
एउटा कुरा के बुझ्न जरूरी छ भने अहिलेको नेतृत्वले कांग्रेस हाँक्न सक्दैनन्। कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भइराखेको छ। यसको असर देशमा पनि परिराखेको छ।
भनेपछि कांग्रेसमा नीति र नेता दुबैको खडेरी छ?
त्यसलाई जे भन्नुस्। खडेरी नै त म भन्दिनँ। जसको पेटमा आगो हुन्छ नि यसपटकको अधिवेशनमा त्यसैले लिड गर्छ, हेर्नुहोला। सेतोपाटी
धराने जनताले धरान उपमहानगरपालिकाको सेवा गर्ने मौका दिनुहुनेछः उम्मेदवार इस्वो